September 2021 – Khabar Silo
अगाडी-पछाडी जतिसुकै बिशेषणहरु जोडेपनि, जस्तोसुकै सुविधा संग जिवन बिताए पनि, जिवनमा जतिसुकै उपलब्धि गरेपनि, हामीलाइ एउटा धृणित सत्यको दुर्गन्धले सधै पछ्छाई । राख्ने छ; त्यो हो हामी संसारको कंगालतम् देशहरु मध्यको एक देशका नागरीक हौ। हामी कसरी कंगाल भयौ? हाम्रो कंगालपनको कारण के हुन सक्ला? के हामी भोतिक रुपमा मात्र गरिब छौ? यी प्रश्नहरु आज […]
Posted on September 30, 2021 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौं असोज १४ / नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले बुद्धएयरका पाइलट आङ्गेलु शेर्पालाई उडान भर्न रोक लगाएको छ। घ’टनाको छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि विमान चलाउन रोक लगाइएको बुद्धएयरले जनाएको छ। घ’टनाको छानविन भइरहेकाले तत्कालका लागि पाइलट शेर्पालाई उडान भर्नमा रोक लगाइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। उनले भने,’ घ’टना छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका […]
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असोज १५ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२१ अक्टोबर १ तारीख आश्विन कृष्णपक्ष दशमी तिथी तिष्य नक्षत्र शिव योग वणिज करण चन्द्रमा कर्कट राशिमा आनन्दादि योगमा उत्पात योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु फर्पिङमा हरिशंकर यात्रा दशमी श्राद्ध अन्तराष्ट्र्यि वृद्ध(वृद्धा दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, […]
नेपाली श्रमिक सिधा दक्षिण कोरिया लैजान आह्वान गरिएका बोलपत्रहरु अस्वीकृत
नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउनको लागि भन्दै सिधा उडानको लागि गरिएको बोलपत्र प्रस्तावहरु कानुनी एवं मुल्यांकनका आधारमा कानुनी एवं प्राविधिक रुपमा योग्य नभएको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत इपिएस कोरिया शाखा ग्वार्कोले आज एक सुचना निकाल्दै प्राप्त बोलपत्रहरु अस्वीकृत भएको जनाएको छ । गएको भदौ २ गते शाखाले काठमाडौ बाट दक्षिण कोरियाको सिओल […]
काठमाडौं जिल्लामा अनावश्यक रुपमा भीडभाड, मेला महोत्स र सभा जुलुस आदि गर्न नपाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आज (बिहीबार) राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सो निर्णय गरेको हो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालद्वारा जारी आदेशमा घर बाहिर मानिसहरु जम्मा हुन नपाउने, भीडभाड गर्न नपाउने, सभा जुलुस […]
सपनामा सेतो सर्प देख्दा अत्यन्तै शुभ,मनले चिताकाे पूरा हुने, ॐ लेखेर एक सेयर गर्नुहाेस्..
✍सर्प र मानवको सम्बन्ध मानव सृष्टिको प्रारम्भिक कालदेखिनै चलिआएको छ। सर्पसंग सम्बन्धित कथाहरु, हिन्दु धर्मशास्त्र तथा पौराणिक कथाहरुमा समावेश भएका छन्। हिन्दु शास्त्र अनुसार सर्पलाई पूजा योग्य जनावर मान्ने गरिन्छ र हरेक वर्ष नागपंचमीमा विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ। भगवान शिवले आफ्नो गलामा साँप बेरेको समेत देख्न सकिन्छ ,जुन हेर्दा हामीले साँपको धार्मिक महत्व समेत बुझ्न […]
काठमाडौं । बुद्ध एयरका पाइलट आङ्गेलु शेर्पालाई उडान भर्न रोक लगाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले घटनाको छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि विमान चलाउन रोक लगाएको हो । घटनाको छानविन भइरहेकाले तत्कालका लागि पाइलट शेर्पालाई उडान भर्न रोक लगाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले भनेको छ, ‘घटना छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि पाइलट शेर्पालाई उडान नर्भन भनिएको […]